အီးမေးလ်ဖြင့်ပါ ၀ င်မှုသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Martech Zone
အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Calculator ကို
ရည်ညွှန်း SPAM စာရင်း
Brandemonium | အောက်တိုဘာလ ၆-၇၊ ၂၀၂၁ | ညီလာခံအတု
Webinar: COVID-19 နှင့်လက်လီ - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိမ်တိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သောမဟာဗျူဟာများ
ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံခရီးကို Fintech တွင်ဖန်တီးခြင်း ဝယ်လိုအား Salesforce Webinar တွင်
Email Engagement ဆိုတာလူမှုဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်သလဲ
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 14, 2015 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
အဖြစ်မကြာမီငါမြင်သည်အတိုင်း နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆောင်းပါးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာသုံးတယ်၊ ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်တိုတယ်။ ဒါ Devesh Design မှအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်ကိုရှုထောင့်သို့ထည့်သွင်းရန်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။ ငါအီးမေးလ်၏စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်။ သံသယရှိသည်နှင့်တစ် ဦး အဖြစ်စွမ်းရည် စျေးကွက်တွန်းအားပေး အသုံးပြုသူများကိုအရေးယူရန်လှုံ့ဆော်ရန်နည်းပညာ။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ လူတိုင်းကလုပ်သင့်သည်။
သို့သော်အီးမေးလ်နှင့်လူမှုရေးကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်လိမ္မော်သီးနှင့်ပန်းသီးဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာတွင်ကြော်ငြာကိုနှိပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းထက်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများများစွာရှိသည်။ သင်၏လူမှုကွန်ယက်သည်သင်၏သတင်းစကားကိုကြားရသည့်အခါအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ဒီတော့ဒီဥပမာကိုအောက်ဖော်ပြပါ infographic မှာသုံးကြည့်ရအောင်။ သင်သည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူ ၁၀၀၀ သို့အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပြီး၎င်းမှလူ ၂၀၂ ဦး ကထိုအီးမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှ ၃၃ ခုသည်၎င်းကိုနှိပ်သည်။
အခုဒီ post ကို Twitter နဲ့ Facebook နှစ်ခုစလုံးမှာနောက်လိုက် ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ social media မှာ share ကြပါစို့။ ဇယားအရ၊ လူ ၁၀ ယောက်ကဒါကိုတကယ်မြင်ပြီး ၃ ကနှိပ်လိုက်တယ်။ အဲဒါလုံးဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။
ဟင့်အင်း၊ ဘာကြောင့်လဲ လူမှုရေးမှတစ်ဆင့်သင်တိုးမြှင့်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုထိုလူအနည်းငယ်ကမျှဝေခဲ့သည်။ ထိုလူအနည်းငယ်တွင်နောက်လိုက် ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ နောက်လိုက်တွေက ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုရောက်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကသန်းနဲ့ချီတယ်။ ဘယ်သူကမှသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကိုတကယ်ကိုပို့ပေးတာဟာရှားပါတယ်။ သို့သော်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုလှိုင်းများမှာလများစွာကြာခဲ့သည်။
ငါတို့မှာရေးသားချက်များရှိသည် Martech Zone ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကျေးဇူးတင်ပြီးရေးသားခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအမြင်များနှင့်ကလစ်နှိပ်ခြင်းများကိုခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုလူမှုရေးရှယ်ယာများကအခြားသူများကိုဆောင်းပါးများရေးသား။ ကျွန်ုပ်တို့အားကိုးကားခြင်းများကို ဦး ဆောင်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမြင့်တက်စေခြင်းဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအသွားအလာကို ဦး တည်စေသည်၊
၎င်းသည်အထောက်အကူပြုသောကောင်းမွန်သောအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်သည် အီးမေးလ်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါဝါ။ သို့သော်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလျှော့ချခြင်းသည်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆိုကြီးမားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလစ်တစ်ချက်တည်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း၏သက်ရောက်မှုအကြောင်းပင်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူမှုရေးသည်အများပြည်သူရှေ့တွင်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားမှတစ်ဆင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူသိရှင်ကြားကိုရရှိရန်နှင့်အီးမေးလ်ကိုလှေပေါ်တွင်လုံးလုံးလျားလျားလွဲချော်နေသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပေးသည်။
Tags: Devesh ဒီဇိုင်းအီးမေးလ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်အီးမေးလ်လူမှုရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်
Douglas Karr Sunday, June 14, 2015 Saturday, June 13, 2015
Douglas Karr တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် Martech Zone နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းအပေါ်အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူ။ Doug သည် အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြည်သူ့ဥက္ကဌ။ သူသည် VP နှင့်တွဲဖက်တည်ထောင်သူဖြစ်သည် HighbridgeSalesforce နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်နိုင်ရန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများကိုကူညီရန်အထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများကိုတီထွင်ခဲ့သည် Dell က Technologies က, GoDaddy, Salesforce, ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် နေပြည်တော်။ ဒေါက်ဂလပ်သည်လည်းစာရေးသူဖြစ်သည် Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging နှင့်ပူးတွဲရေးသားသူ သာ။ ကောင်း၏စီးပွားရေးစာအုပ်.
Bitrix24 - စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဆွစ်စစ်တပ်ဓား
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?	ပြန်ကြားချက် Cancel
ဤ site ကိုစပမ်လျှော့ချဖို့ Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ comment ကိုဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေ့လာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် Podcasts များ
Kate Bradley Chernis: အကြောင်းအရာဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏အနုပညာကိုမည်သည့် Artificial Intelligence ကမောင်းနှင်နေသနည်း
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက (https://www.lately.ai) ၏စီအီးအို Kate Bradley-Chernis နှင့်စကားပြောပါသည်။ Kate သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ရလဒ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကိုတီထွင်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးသည်အဖွဲ့အစည်းများ၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုသည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။ လတ်တလောတွင်လူမှုမီဒီယာ AI အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။
တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည့်အားသာချက် - အခွင့်အရေးများအားလုံးအပေါ်သင်၏အတွေးများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဝအတွက်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခြင်း
ဤသည်၌ Martech Zone အင်တာဗျူး, ငါတို့ Mark Schaefer မှပြောဆိုပါ။ မာ့ခ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင်မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာ၊ တီထွင်သူစာရေးသူ၊ ဟောပြောသူ၊ podcaster နှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်ဖြစ်သော Cumulative Advantage အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထက် ကျော်လွန်၍ စီးပွားရေးနှင့်ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောသော၊ ငါတို့ကမ္ဘာမှာနေတယ် ...
Lindsay Tjepkema: ဗီဒီယိုနှင့်အသံလွှင့်ဌာနသည်ရှုပ်ထွေးသော B2B စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများသို့မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဤသည်၌ Martech Zone အင်တာဗျူး, ငါတို့ Casted, Lindsay Tjepkema ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်စီအီးအိုအားဟောပြောပါ။ Lindsay သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုရှိခဲ့ပြီးဝါရင့် podcaster တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ၏ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုတိုင်းတာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ကူးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် Casted ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Lindsay ကနားထောင်သူတွေကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးတယ်။
Marcus Sheridan: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါ ... သို့သော်ဖြစ်သင့်သည်
Marcus Sheridan သည်သူ၏စာအုပ်အားကမ္ဘာအနှံ့ရှိပရိသတ်များအားသင်ကြားပေးနေသည်မှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးရှိပြီ။ စာအုပ်တစ်အုပ်မဖြစ်မှီမြစ်တွင်းရေပြင်ပုံပြင် (အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့်) စာအုပ်များ၊ စာပမြေားများနှင့် ၀ င်ရောက်လာမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသည့်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ကွန်ဖရင့်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီမှာ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း…
Pouyan Salehi: ရောင်းအားစွမ်းအားကိုမောင်းနှင်နေသောနည်းပညာများ
ဤသည်၌ Martech Zone အင်တာဗျူး, ငါတို့ကအမှတ်စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်, Pouyan Salehi စကားပြောနှင့် B2B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဝင်ငွေအဖွဲ့များအတွက်အရောင်းဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အလိုအလျောက်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါတယ် B2B အရောင်းပုံသဏ္trendsာန်ရှိသောနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီးအရောင်းမောင်းနှင်မည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။
Michelle Elster: စျေးကွက်သုတေသန၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Rabin သုတေသနကုမ္ပဏီဥက္ကthe္ဌ Michelle Elster နှင့်စကားပြောသည်။ Michelle သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးတို့တွင်နိုင်ငံတကာတွင်ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံရှိသောအရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနနည်းစနစ်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ ဤစကားလက်ဆုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသည်မှာ * ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်သုတေသနတွင်အဘယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသနည်း။ * ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ
Guy Bauer နှင့် Umault မှ Hope Morley: ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုသို့သေခြင်း
ဤသည်၌ Martech Zone အင်တာဗျူး, ငါတို့တည်ထောင်သူနှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Guy Bauer နှင့် Umault ၏, တီထွင်ဖန်တီးမှုဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အရာရှိချုပ်မျှော် Morley စကားပြော Umault ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဗွီဒီယိုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်သာမန်ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုများဖြင့်အောင်မြင်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။ Umault သည်ဖောက်သည်များနှင့်အထင်ကြီးခြင်းရရှိသည်။
Winfluence ၏စာရေးသူ Jason Falls: သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလောင်ကျွမ်းရန် Influencer Marketing ကို Reframing
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း, Winfluence ၏စာရေးဆရာ Jason Falls နှင့်စကားပြောပါ။ Jason သည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ရင်းမြစ်အားယနေ့အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များမှတဆင့်ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများအသုံးပြုသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုပေးသည်။ အပြင်ကိုမှီခြင်းနှင့် ...
John Voung: အဘယ်ကြောင့်အထိရောက်ဆုံးသော SEO ဆိုသည်မှာလူဖြစ်ခြင်းမှအစပြုရခြင်းဖြစ်သည်
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသခံ SEO ရှာဖွေရေး၊ ဒေသခံ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှု၊ အကြောင်းအရာနှင့်လူမှုမီဒီယာအေဂျင်စီ John Vuong နှင့်စကားပြောသည်။ John သည်ဖောက်သည်များနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူ၏ SEO အောင်မြင်မှုသည် Local SEO အတိုင်ပင်ခံများကြားတွင်ထူးခြားသည်။ John သည်ဘဏ္inာရေးတွင်ဘွဲ့ရှိပြီးရိုးရာ၌ဒစ်ဂျစ်တယ်မွေးစားသူဖြစ်သည်။
Jake Sorofman: CRM ကို B2B ဖောက်သည်ဘဝသက်တမ်းကိုဒီဂျစ်တယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသစ်တီထွင်ခြင်း
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ MetaCX ဥက္ကPresident္ဌ Jake Sorofman နှင့်ဖောက်သည်ဘဝသက်တမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ရလဒ်အခြေပြုချဉ်းကပ်နည်းသစ်တွင်ရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ MetaCX သည် SaaS နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီများကိုအဆင့်တိုင်းတွင်သုံးစွဲသူများပါ ၀ င်သောချိတ်ဆက်ထားသောဒီဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြင့်၎င်းတို့မည်သို့ရောင်းချသည်၊ မည်သို့ပို့ဆောင်သည်၊ SaaS မှဝယ်သူများ…
သင်၏နောက်ဆုံးစာမူများ၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့် podcasts များဖြင့်သင်၏အီးမေးလ်ကိုအကျဉ်းချုပ်အီးမေးလ်ရယူပါ။
နေ့စဉ်မှတ်တမ်း အပတ်စဉ် Digest
စာရင်းသွင်းပါ Martech Zone Podcast ကိုအင်တာဗျူး
Martech Zone အမေဇုံအပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone Apple နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Martech Zone Google Podcasts မှာအင်တာဗျူး
Martech Zone Google Play တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Martech Zone Castbox အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone ကက်စထရိုအပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone အုံ့အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone Pocket Cast အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone Radiopublic အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone Spotify အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone Stitcher အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone TuneIn အပေါ်အင်တာဗျူးများ
Martech Zone RSS ကိုအင်တာဗျူးများ
ငါတို့ရှိနေပြီ Apple ကသတင်းများ!
လူကြိုက်အများဆုံး Martech Zone ဆောင်းပါးများ
© Copyright 2021 DK New Media, မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
နောက်ကျောထိပ်တန်းမှ | ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Martech Zone App များ
Analytics & စမ်းသပ်ခြင်း
အကြောင်းအရာ Martech Zone
ပေါ် Advertise Martech Zone
သင်၏အကြိုက်များနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါလည်ပတ်မှုများအားသတိရခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ “ Accept” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။
cookie settings ကိုAccept
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်သွားကြည့်နေစဉ်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်၏ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှလိုအပ်သည့်အရာအမျိုးအစားခွဲခြားထားသော cookies များကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ browser တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်နားလည်ရန်ကူညီသည့် third-party cookies များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သုံးသည်။ သင်၏ cookies များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာသင်၏ browser ထဲတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်ဤ cookies များကိုဖယ်ရှားရန်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။ သို့သော်အချို့သော cookies များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ browsing အတွေ့အကြုံကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
လိုအပ်သော cookies များကိုကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့က်ဘ်ဆိုက်အဘို့လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင်သာအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေး features တွေကိုသေချာကြောင်း cookies များကိုပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား cookies များကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားကြပါဘူး။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အလုပ်လုပ်ဘို့အထူးသဖြင့်လိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်းနှင့် analytics, ကြော်ငြာတွေအခြား embedded contents တွေကိုမှတဆင့်အသုံးပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းရန်အထူးကိုအသုံးပြုသည်ဆို cookies များကို Non-လိုအပ်သော cookies များကိုအဖြစ်ချေါနေကြသည်။ ဒါဟာကြိုတင်သင့်ရဲ့ website မှာဒီကွတ်ကီးတွေကိုအပြေးဖို့အသုံးပြုသူသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။